शिरीषको ‘लौरी च च’ : मौलिक अनि लोपोन्मुख तीज गीत – Nayadhar
शिरीषको ‘लौरी च च’ : मौलिक अनि लोपोन्मुख तीज गीत
मंगलबार, साउन २६, २०७८ | २१:२५:५७ |
पाल्पा । गायक शिरीष देवकोटाले सोमबारमात्रै सार्वजनिक गरेका हुन् तीज गीत ‘लौरी च च’ ।
‘धेरै वर्ष अगाडिसम्म मेरो मामाघर हजुरआमाहरूले गाउने गर्नुभएको र अहिले लोप भइसकेको दुर्लभ अनि पृथक शैलीको गीत ‘लौरी च च’ यहाँहरु समक्ष प्रस्तुत गरेको छु’ गीतको भिडियो सार्वजनिक गर्दै शिरीषले भनेका छन्, ‘आमाको लय संकलन अनि शब्दमा रहेको यो गीत हेरेर, सुनेर अमूल्य प्रतिक्रिया दिनुहुनेछ भन्ने अपेक्षा लिएको छु ।’
शिरीष देवकोटा । यो नाम दर्शक एवं स्रोतामाझ विशेषतः रोइला गीतबाट परिचित नाम हो । रोइला गीतमा शिरीषले आफ्नो गर्विला,दर्विलोे पहिचान बनाएका छन् । स्रोता एवं दर्शकलाई रोइलाप्रति आकर्षित गराउनेमा शिरीषको ठूलो योगदान छ । ‘रोइलाका राजा’ यो शिरीषले यत्तिकै पाएको उपनाम होइन् ।
-‘लौरी च च’मा नृत्य गर्दै कलाकारहरु
‘खरबारीमा जान्छु, मुठ्ठी लिन्छु टोलाउँछु, पात बजाउँदै बोलाउँछु’ होस वा ‘म त आउने थिइनँ, यही चाल होला भन्या भा’ । अथवा ‘दुर्गा हौ कि भवानी’ । यी उनका निकै चलेका रोइला गीत हुन् ।
उसो त उनले रोइला गीतभन्दा अन्य दर्जनौं गीतहरु सार्वजनिक गरेका छन् । ती गीतहरुबाट पनि उनले स्रोता एवं दर्शकको मन जित्दै आएका छन् । विशेषगरी मौलिकता र मार्मिकताका कारण ।
पाल्पाको दर्लमडाँडामा जन्मिएका उनी गाउँघरमा बोलीचालीको शब्द र भाका टिपेर गीत ल्याउँछन् । कुनै मार्मिक, कुनै रोमान्टिक । गीतमा मौलिकता भने कहिल्यै बिर्सिदैनन् ।
‘चाँचर’, ‘मालचरी’ होस् वा ‘छोरो अमेरिका छ’, ‘खाडीको लाहुरे’, ‘अञ्जुली’ । हालै सार्वजनिक तीज गीत ‘लौरी च च’ मौलिक गीतहरुकै निरन्तरता हो ।
आमा टुल्कादेवी देवकोटाको लय संकलन अनि शब्दमा रहेको गीतमा शिरीष र गायिका शान्तीश्री परियारले स्वर दिएका छन् ।
शिरीषले यस गीतबारे थप प्रष्टयाएका छन्, ‘करिब ३०/४० को दशकसम्म पनि (पाल्पा) मावली हजुरआमा स्व. उमादेवी न्यौपाने र उहाँका केही साथीहरुले तीजको दिन विशेष प्रस्तुतिका साथ यही लय र शैलीमा ‘लौरी च च’ गाउने गर्नुहुन्थ्यो । त्यतिबेला यो गीत गाउनुहुने सबै आमाहरु अहिले स्वर्गीय भैसक्नु भएकोले यो गीतको इतिहास, उत्पत्ति र अर्थको बारेमा पूर्ण जानकारी प्राप्त हुन सकेन । दुःखको कुरा यो गीत पुस्तान्तरण हुन पनि सकेन र गाउन छोडियो । गीतको लय अनि शैली याद रहेकोले केही नयाँ शब्दहरूसहित आमाले गीत सुनाउनुभयो । कम्तीमा यो लय अहिलेको पुस्ताको लागि पनि भिन्न अनि मनोरन्जनपूर्ण हुने ठानेर गीतलाई प्रकाशन गर्ने निर्णय गरियो । गीत प्रकाशन भइसकेपछी पनि यसको बारेमा थप केही जानकारीहरु प्राप्त हुने आशा राखेको छु ।’
गीतको भिडियो हेर्नुभयो ?
स्मृति तिमिल्सिना गुरुआमाको निर्देशनमा बनेको भिडियो उत्तिकै मौलिक लाग्छ । रीना थापा मगर, सुमन थापा मगर, रुविना अधिकारी, बविन सिँह ठकुरी लगायतको भिडियोमा अभिनय छ । गीत सार्वजनिक भएसँगै धेरैले यस गीतलाई मौलिक भनेका छन् । लोक भाका हस्तान्तरणका लागि शिरीषकी आमालाई धन्यवाद समेत दिएका छन् । लोक संस्कृती विर्सिएर आएका परिवारसँगै बसेर हेर्न नसकिने गीतहरुको भीडमा मौलिकता बोकेको गीत सुन्न हेर्न पाएकोमा दर्शकहरुले खुसी ब्यक्त गरेका छन् ।
गायक शिरीषले पनि आफूले पाएको प्रारम्भिक प्रतिक्रियाबाट निकै खुसी रहेको बताएका छन् । नयाँधारसँग कुरा गर्दै शिरीषले भने, –‘व्यवसायिक रुपमा हेर्नेहरुका लागि यो गीत सामान्य लाग्नसक्छ तर गीतसंगीतमै आफूलाई समर्पित गर्नेहरु, यो क्षेत्रलाई बुझेका व्यक्तिहरुबाट आउने प्रतिक्रिया मेरो लागी ठूलो हो । जे सोँचेको थिएँ, त्यस्तै प्रतिक्रियाहरु पाईरहेको छु ।’
शिरीषले आफ्नो मौलिक यात्रालाई निरन्तरता दिँदै जाने बताए । उनले अगाडि भने, ‘मेरो आफ्नो मौलिक यात्रालाई अझै परिष्कृत गर्दै, अझै अब्बल बनाउँदै जाने क्रममा छु । व्यवसायिक, भ्यूजका हिसावले जे–जस्तो मोड लिएपनि आफ्नो बाटोमा अडिग छु ।’
सुरेश श्रेष्ठको छायाँकन रहेको ‘लौरी च च’को भिडियोलाई प्रकाश धमलाले सम्पादन गरेका हुन् । गायक शिरीषले आफ्नै युट्युब च्यानलमार्फत यस गीत सार्वजनिक गरेका हुन् ।
आजदेखि ‘कमेडी हब’ लिएर आउँदै ‘माग्ने बुढा’